नेपालमा अन्तराष्ट्रिय आर्य महासम्मेलन र नेपालमा धार्मिक पर्यटन
प्रकाशित मिति : ११ भाद्र २०७४, आईतवार १४:३७
गत साल कार्तिक महिनाको ४,५, र ६ गते काठमाडौं, नेपालमा पहिलो पटक अन्तराष्ट्रिय स्तरको सनातन वैदिक आर्य महासम्मेलन सम्पन्न भएको थियो ।
काठमाडौंमा सैनिक मन्च टँुडिखेलमा २०७४ साल कार्तिक ४,५ र ६ (अक्टुवर २०,२१ र २२, २०१६) मा े आयोजना गरिएको सो सम्मेलनमा नेपालका पहाड र तराई बाट साथै छिमेकी देश भारतबाट सवैभन्दा बढी संख्यामा आएका प्रतिनिधले सम्मेलनमा भाग लिएका थिए । साथै विदेशमा बस्ने भारतीय मुलका व्यक्तिहरु अमेरिका , सुरिनाम, मरिसस , म्यानमार ,बंगलादेस, अष्ट्र्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, नेदरल्याड आदि देशबाट सम्मेलनमा भाग लिन आएका थिए । सम्मेलनमा भारतको कस्मिर देखि कन्याकुमारीसम्मका प्रतिनिधि र उत्तर पुर्वी भारतको असम ,मेघालय राज्य देखि महाराष्ट्र, गुजरात , राजस्थान ,मध्य प्रदेर्श कर्नाटक आदि भारतका प्रान्तीय राज्यबाट आ —आफनो आर्य समाजवाट प्रकिनिधिहरु सहभागी भएका थिए । भारतको राज्य मध्येबाट सबैभन्दा बढी उत्तर प्रदेसबाट बढी सहभागीहरु सम्मेलनमा भाग लिनको लागि आएका थिए । विदेसबाट सबैभन्दा बढी मरिससबाट १ सय १० जना सम्मेलनमा आएका थिए । भारत पछि आर्य समाजको विकसति भएको मुलुक मध्ये मरिशस एक नम्बरमा पर्दछ । कुल १३ लाख जनसंख्या भएको मरिशसमा झण्डै ४ सय आर्य समाजी संस्थाहरु रहेका छन ।
नेपालमा यो गत वर्षको पर्यटनको मौसम शुरु हुन लाग्दा भएको सो सम्मेलनले विशेष गरि नेपालको पर्यटन उद्योगलाई केही मात्रामा टेवा पुन्याएको थियो । । सम्मेलनमा आउने सहभागीहरु आाफनो क्षमता अनुसार काठमाडौंको पाँचतारे होटल रेडिसन , ह्यायत रिजेन्सी , होटल वडल्याण्ड,गौशलाको महाराजा होटल, सुन्धारो गुलाब देखि गौशालाको धर्मसालामा समेत बसेका थिए भने केही साधारण सहभागीहरुलाई टँुडिखेलको प्राङ्गंन भित्रै बनाइएको पन्डालमा रात्रि विश्रामको व्यवस्था मिलाइएको थियो । सम्मेलनको अवधिभर टँुडिखेल क्षेत्रको वरिपरि न्युरोड, सुन्धारा , रन्तपार्क , दरबार मार्ग भुकुटी मण्डप वरिपरिको क्षेत्र सम्मेलनमय भए संगै त्यस क्षेत्रमा सम्मेलनको चहल विशृष चहल पहल देख्न्थ्यिो ।
यसै सन्र्धभमा सम्मेलनमा छिमेकी देश भारतसंगै सबैभन्दा टाढा न्युजिल्याडबाट १७ हजार किलोमिटरको यात्रा तय गरेर आएका दम्पति हरिस सचदेवा र उर्मिला सचदेवा सहभागी भएका थिए । यसैगरी युरोपियन देशको प्रतिनिधित्व गर्दै नेदरल्याडबाट ४ जना महिलाहरु सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए ।
सम्मेलनमा आएका केही सहभागीहरुसंग गरिएको छोटो कुराकानी ः
इन्द्रा किन्नो : नेदरल्याड (हल्याण्ड)
उनी नेदरल्याड आर्य समाजको तर्फबाट सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएकी थिइन ।
नेपालमा तपाईहरु नेदरल्याडबाट कतिजना सहभागी सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनु भएको हो ?
हामी ४ जना महिलाहरु पहिलो पटक सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका हौ ।
नेपालको विमानस्थलमा ओर्ले पछि तपाई सम्मेलन स्थलमा कसरिु पुग्नु भयो ?
हामीलाई आयोजकले सुन्धाराको गुलाब होटलमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको े थियो । हामी सिधै एयरपोर्टबाट प्रिपेड टयाक्सी लिएर गुलाब होटल आयों । यसमा एउटा रोचक घटना पनि घटयो । म ग’लाब होटलमा प’गे पछि मेरो कयामरा टयाक्सीमा छोडिएको थाहा भयो । पछि म संग भएको रसिदमा रहेको गाडी नम्बर र टेलिफोन नम्बरमा भएको ठेगानामा मैले होटलबाट फोन गरि पछि त एक घण्टा भित्रै मेरो क्यामरा होटल आई पुग्यो यसले मलाई यहाँको टयाक्सी व्यवसाय र यहाँका मानिसहरु बढी इमान्दार रहेको ज्ञात भयो । । म यहाँको मानिसहरुको पहिलो व्यवहारबाटै ख’सी भए ।
सम्मेलनमा सहभागी भएर कस्तो लाग्यो ?
म सम्मेलन अवधिभर ३ दिनै टँुडिखेलको खुलामन्चमै बसें ।म सम्मेलनको उदघाटन सत्र नेपालकी पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भयडारीगर्नु हुने समाचारले बढी उत्साहित थिए । मैले उदघाटन सत्रमा राष्ट्रपतिसंगै मन्चमा बस्न पाउँदा आफुलाइृ भाग्यमानी सम्झिएको थिए । । साथै मैले सम्मेलनको अन्तिम दिन नेदरल्याण्डाको तर्फबाट सम्मेलनको अन्तिम दिन कार्तिक ६ गते सम्बोधन गर्ने अवसर पनि पाएको थिए । ।
तपाई सम्मेलनमा आउने खास उद्येस्य के हो ?
खास त मैले नेपालबारे सानै दिेखि सुनेको थिए तर प्रत्यक्ष देखेकी थिइन । । माउन्ट एभरेष्टको देश भनेर मैले नेपाललाई सानै देखिनै सुनेकी थिए । र नेपालमा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन हुर्ने खबर पाउने बित्तिकै ै हामी सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपालको राजधानी काठमाडौं आउने निधो गरेका थियौं । ।
अर्को कुरा नेदरल्याण्डको आर्य समाजका अधयक्षको पहलमा राधधानी अम्र्सडम्बा बन्न लागेको आर्य समाज मन्दिर र भवनको सहयोग जुटाउन पनि हामी सम्मेलनमा आएका थियौं ।
सम्मेलन पछि तपाइहरु कहाँ कहाँ जाने कार्यक्रम छ नि ?
हामी सम्मेलन पछि सर्व प्रथम पोखरा ,र त्यस पछि काठमाडौं फर्किएर नगरकोटको सुर्याेदयको अवलोकन पछि हेरि , पशुपति नाथ मन्दिरको दर्सन गछौ र सम्भव भए हामी जनकपुरको राम जानकी मन्दिर पनि जान्छौ ।
धनराजी देवी प्रसाद :नेदरल्याड ,
तपाई त पहिलो पटक नेपाल आउनु भएको हो ?तपाइले कस्तो महशुस गनुृ भएको छ ?
हो मलाई नेपालको राजधानी काठमाडौंमा पहिलो पटक भएको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा आउन जुन्याो । म यसमा आफुलाई भाग्यमानी महशुस गर्दछु । मैले अरु धेरै देशमा भएको खन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएको छु । तर अरु देशको तुलनामा नेपालमा सहभागीहरुको संख्या बढी पाए । शायद नेपालसंग सीमा जोडिएको कारणले होला यहाँ भारतबाट आएका सहभागीहरु धेरै थिए ।
सम्मेलन स्थलमा के के समस्या देख्ुनु भयो त ?
मुख्य कुरा सम्मेलन स्थलमा मैले शौचालयको समस्या देखें । त्यँहा शौचालयको लागि पयाप्त मोबाइल गाडी नभएकाले गर्दा मानिसहरुलाई शौचालय जान समस्या परेको देखें । अकर्«ो कुरा आयोजकले सचिवालय पनि राम्ररी संचालन गर्न नसकेको पाएँ । यसैगरी सम्मेलनमा मैले मिडियो मैत्री पनि देख्न पाइन । म त सम्मेलनको सिलसिलामा धेरै देशको भ्रमण गरेको छु । तर अरु देशको तुलनामा नेपालमा मिडियाको विकास भएको सुने पनि यो सम्मेलनमा मिडिया प्राय शुन्य रहेको मैलै पाँए ।अक्रो कुरा सम्मेलनमा सहभागीहरुलाई भोजनको पनि व्यवस्था गरिएको भए पनि समय नमिल्दा खाना खानको लागि घण्टो लाइन लाग्नु पर्ने स्थिति देखें । आगामी सम्मेलनमा यसमा सुधार हुनेमा आशा गर्दछु ।
नेपालका मानिसहरु यहाँलाई कस्तो लाग्यो नि ?
मलाई यहाँका मानिसहरु असाध्ये राम्रो लाग्यो । मलाई अझ यो सम्मेलन नेपालकी पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले उदघाटन गरेकोमा गौरव अनुभव गरै । मा सीताको यस पावन भुमिमा महिलाले सम्मान पाएकोमा खुसी भएको छु । मैले त यहाँ नेपालको सवौच्च पद राष्ट्रपति, संविधान सभाकी अध्यक्ष र नेपालको सव्वोच्च अदालत तीनवटै निकायमा महिला रहेको थाहा पाए यो सम्पुर्ण महिलाहरुको लागि गौरवको विषय हो ।
हरिश सचदेवा : भारतीय मुलका यी व्यक्ति विगत २५ वर्ष देखि न्यजिल्याण्डमा बसोवास गदै छन । उनी यस पटक आफनी पत्नी उर्मिला सचदेवा संगै नेपालबाट सबैभन्दा टाढाको १७ हजार किलोमिटरको हवाइ यात्रा पार गरि नेपालमा भएको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आएका े हुन । उनले न्यजिल्याडमा पहिलो पटक आर्य समाजको स्थापना गरेको थिए । उनी न्यजिल्याडको आर्य समाजको संस्थापक अध्यक्ष हुन । उनको भनाई अनुसार न्यजिल्याडमा १ सय भारतीय परिवार रहेका छन र ती परिवारले अहिले न्यजिल्याडमा े १३ वटा आर्य समाज संस्था चलाएका छन ।
उर्मिला सचदेवा : उनी आफना पती हरिश सचदेवासंगै नेपालमा पहिलो पटक काठमाडौंमा भएको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं आएकी हुन । उनले नेपाल १९५३ मा न्यजिल्याडसंग सगरमाथाले नाताले जोडिएका र े अहिले आर्य समाज संग जोडिएको बताइन । किनकी नेपालका तेन्जिङ्ग नोगैले न्युजिल्याडका सर एडमण्ड हिलारी संग पहिलो पटक सगरमाथाको पहिलो पटक सफल ओराहण गरेका थिए । उनले हिलारी मृत्युको केही समय अघि हिलारीसंग प्रत्यक्ष भेट गरि हात मिलाएको अनुभव पनि बताइन ।
अहिले पनि एडमण्ड हिलारीकी छोरी लेडी हिलारी नेपालको लागि न्यजिल्याण्डकी लागि अनरेरी कन्सुलेट रहेको उर्मिलाले जानकारी गराएन । ।
उनले नेपाल आउने अक«ो उद्येश्य नेपालको पर्यटनलाई नियाल्ने पनि बताइन । आफु यसपालि लामो टे«किङ्ग जान नपाए पनि पोखरा गएको स्मरण गरिन । उनले आफुहरुले पोखराको फेवाताल, डेभिस फल, महेन्द गुफा र सराड.कोटबाट अर्णपुर्ण हिमालको मनोरम दृश्यको अवलोकन गरेको अनुभव सुनाइन । त्यसैगरी अहिले मौसम सफा रहेकाले आफुहरुले नगरकोटबाट सुर्योदयको पनि आनन्द लिएको अनुभव सुनाइन । त्यर्सैगरि भारतमा आफुले भगवान शिवको तीनबटा धामको दर्शन गरे पनि अपुर्ण रहेकाले पशुपति नाथको दर्शन पछि पुर्ण भएको अनुभव सुनाइन ।
नेपाल मुख्यत हिन्दु बौद्धहरुको पवित्र पावन भुमि भएकाले समय समयमा यहाँ विदेशी तीर्थयात्रीहरुको घुँइचो लाग्ने गर्दछ । प्राय नेपाल भारतसंग लामो सीमा जोडिएकाले प्राय बाह्रै महिना भारतीय धार्मिक तीर्थ यात्रुहरुको भीडभाड हुने गर्दछ । यसपालि काठमाडौंमा भर्खरै सम्पन्न भएको अन्तराष्ट्रिय आर्य सम्मेलनले पनि केही मात्रामा धार्मिक पर्यटन प्रबद्धनमा सहयोग पुन्याएको छ । सम्मेलनमा सहभागी झण्डै दस हजार धार्मिक तीर्थयात्री मध्यै झण्डै २० प्रतिसतले पोखरा भ्रमण गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । अरु बाकी तीर्थ यात्रुहरु काठमाडौं पशुपतिनाथ मन्दिर, स्वयमभ’ साँख” आदि भ्रमण गरि आ आपनो देश फर्किएका थिए ।